Exodus 29 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ɔkwan a wɔfaa so hyɛɛ wɔn asɔfo (1-37)
Afɔre a wɔbɔ no da biara (38-46)
29 “Eyi na fa tew wɔn ho na wɔatumi asom sɛ asɔfo ama me: Fa nantwinini kumaa baako ne adwennini abien a wɔte apɔw,+ 2 na fa hwiit siam muhumuhu yɛ paanoo a mmɔkaw* nnim, na fa ngo fra esiam no bi yɛ paanoo a mmɔkaw nnim a ɛte sɛ kawa.+ Afei yɛ paanoo ntraantraa a mmɔkaw nnim, na fa ngo sra so. 3 Fa gu kɛntɛn mu+ na fa ka nantwinini ne adwennini abien no ho bra m’anim. 4 “Afei fa Aaron ne ne mma no bra ahyiae ntamadan no kwan ano,+ na ma wɔmfa nsu nguare.+ 5 Fa ataade tenten no,+ nsasin no, efɔd* no, ne nkatabo no hyɛ Aaron, na fa abɔso* no bɔ ne mu wɔ nguguso no so.+ 6 Fa abotiri no bɔ ne ti na fa ahosohyira sɛnkyerɛnne kronkron* no bɔ abotiri no anim.+ 7 Wuwie a, fa ɔsrango no,+ na hwie gu n’apampam fa sra no.+ 8 “Afei fa ne mma no nso bra, na fa ntaade tenten no hyehyɛ wɔn.+ 9 Aaron ne ne mma no nyinaa, fa nea wɔde bɔ wɔn mu no bobɔ wɔn mu, na fa abotiri no nso bobɔ wɔn. Ma ɛnyɛ mmara a ɛda hɔ sɛ wɔn fifo na wobedi asɔfo daa.+ Eyi ne ɔkwan a wobɛfa so ahyɛ Aaron ne ne mma asɔfo.*+ 10 “Afei fa nantwinini no bra ahyiae ntamadan no anim na Aaron ne ne mma mfa wɔn nsa ngu aboa no apampam.+ 11 Kum nantwi no wɔ Yehowa anim wɔ ahyiae ntamadan no kwan ano.+ 12 Fa wo nsateaa bɔ nantwi no mogya mu, na fa sosɔ afɔremuka no mmɛn+ no ho, na hwie mogya a aka no nyinaa gu afɔremuka no ase.+ 13 Afei srade+ a ɛwowɔ aboa no nsono ne ne mmerɛbo ho, ne asaabo abien no ne ɛho srade no, yiyi na hyew wɔ afɔremuka no so.+ 14 Nantwi no nam, ne nhoma, ne ne bin de, fa ogya hyew wɔ asoɛe no akyi. Eyi yɛ bɔne ho afɔre. 15 “Afei fa adwennini no baako, na Aaron ne ne mma mfa wɔn nsa ngu odwennini no apampam.+ 16 Kum odwennini no na fa ne mogya pete afɔremuka no ho hyia.+ 17 Twitwa aboa no mu asinasin na hohoro ne nsono+ mu ne ne nan* ho, na fa esin biara to ne sin foforo ho kosi ne ti. 18 Hyew odwennini mu no nyinaa wɔ afɔremuka no so. Ɛyɛ ɔhyew afɔre huamhuam* a wɔhyew ma Yehowa.+ Ɛyɛ afɔre a wɔde ogya hyew ma Yehowa. 19 “Afei fa odwennini a waka no nso bra na Aaron ne ne mma mfa wɔn nsa ngu odwennini no apampam.+ 20 Kum odwennini no na fa ne mogya no bi yɛ Aaron aso nifa ne ne mma no aso nifa, na fa bi nso yɛ wɔn nsa nifa kokurobeti ne wɔn nan nifa kokurobeti ho, na fa mogya no bi pete afɔremuka no ho hyia. 21 Afei fa mogya a ɛwɔ afɔremuka no so ne ɔsrango+ no bi pete Aaron ho ne ne ntaade mu, na fa bi nso pete ne mma ho ne wɔn ntaade mu, na ama ɔne ne ntaade ne ne mma ne wɔn ntaade ayɛ kronkron.+ 22 “Odwennini no srade, ne dua a adɔ srade no, srade a ɛwowɔ ne nsono ne ne mmerɛbo ho, n’asaabo abien ne srade a ɛwowɔ ho,+ ne ne nan nifa no, yiyi ne nyinaa, efisɛ ɛyɛ asɔfohyɛ guan.+ 23 Afei yi paanoo kurukuruwa, paanoo a ɛte sɛ kawa a ngo wom, paanoo tratraa a mmɔkaw nnim fi kɛntɛn a ɛwɔ Yehowa anim no mu. 24 Fa ne nyinaa hyɛ Aaron ne ne mma nsam, na ma wonhim no sɛ ohim afɔre wɔ Yehowa anim. 25 Wowie a, na woagye afi wɔn nsam de aka ɔhyew afɔre a edi kan no ho ahyew wɔ afɔremuka no so; ɛbɛyɛ afɔre huamhuam* wɔ Yehowa anim, afɔre a wɔde ogya hyew ma Yehowa. 26 “Afei oguan a wɔde bɛbɔ afɔre de ahyɛ Aaron sɔfo no,+ fa ne koko na him wɔ Yehowa anim sɛ ohim afɔre. Ɛno na ɛbɛyɛ wo kyɛfa. 27 Oguan a wɔde bɛbɔ afɔre de ahyɛ Aaron ne ne mma asɔfo no,+ fa ne koko a wɔde bɛbɔ ohim afɔre no ne ne nan a ɛka afɔrebɔde kronkron no ho no, na dwira ho. 28 Eyi bɛyɛ Aaron ne ne mma dea. Ɛyɛ ahyɛde a Israelfo bedi so daa, na ɛyɛ afɔrebɔde kronkron a Israelfo de bɛma wɔn.+ Sɛ wɔbɔ asomdwoe afɔre a, wɔde afɔrebɔde+ kronkron yi bɛma Yehowa. 29 “Aaron ntaade kronkron no,+ sɛ wɔsra ne mma+ a wobedi n’akyi aba no hyɛ wɔn asɔfo a, wɔbɛhyɛ. 30 Ne mma no mu nea obedi n’ade sɛ ɔsɔfo no, sɛ ɔba ahyiae ntamadan no mu bɛsom wɔ kronkronbea hɔ a, ɔbɛhyɛ no nnanson.+ 31 “Oguan a wɔde bɛbɔ afɔre ama asɔfo no, fa ne nam a aka no, na noa wɔ baabi a ɛhɔ yɛ kronkron.+ 32 Aaron ne ne mma nwe+ odwennini no nam na wonni paanoo a ɛwɔ kɛntɛn mu no wɔ ahyiae ntamadan no kwan ano. 33 Nea wɔde bɛpata ama wɔn, de adwira wɔn ho a ɛno na wɔde bɛhyɛ wɔn asɔfo* no, ma wonni. Nanso obiara a ɔnyɛ ɔsɔfo* rentumi nni bi, efisɛ ɛyɛ kronkron.+ 34 Sɛ asɔfohyɛ guan no nam anaa paanoo no bi ka ma ade kye so a, nea ɛbɛka biara fa ogya hyew.+ Ɛnsɛ sɛ obiara di, efisɛ ɛyɛ kronkron. 35 “Nea maka akyerɛ wo yi nyinaa, yɛ Aaron ne ne mma saa pɛpɛɛpɛ. Nnanson na wode bɛhyɛ wɔn asɔfo.*+ 36 Da biara, wode nantwinini bɛbɔ bɔne ho afɔre, na wode adwira afɔremuka no ho afi bɔne ho de atew ho. Afei fa ngo sra afɔremuka no ma ɛnyɛ kronkron.+ 37 Fa nnanson pata ma afɔremuka no na dwira ho sɛnea ɛbɛyɛ a afɔremuka no bɛyɛ kronkron paa.+ Ansa na obi de ne nsa bɛka afɔremuka no, ɛsɛ sɛ ɔyɛ kronkron. 38 “Nea wode bɛbɔ afɔre wɔ afɔremuka no so ni: da biara,+ wobɛfa adwennini nkumaa abien a wɔn mu biara adi afe. 39 Fa adwennini nkumaa no baako bɔ afɔre anɔpa na fa baako nso bɔ afɔre anwummere a anim rebiribiri.*+ 40 Sɛ wode odwennini kumaa a odi kan no rebɔ afɔre a, fa ngo pa a efi ngodua mu hin* nkyem anan mu baako, na fa fra esiam muhumuhu efa susude* nkyem du mu baako ka ho, na fa bobesa hin nkyem anan mu baako nso bɔ nsã afɔre. 41 Odwennini kumaa a ɔto so abien no, fa bɔ afɔre anwummere a anim rebiribiri.* Fa aduan afɔre ne afɔrebɔ nsã no bi ka ho te sɛ anɔpa de no ara. Fa bɔ afɔre huamhuam* a wɔde ogya hyew ma Yehowa. 42 Mo awo ntoatoaso nyinaa mu no, mommɔ ɔhyew afɔre yi wɔ Yehowa anim daa wɔ ahyiae ntamadan no kwan ano, na ɛhɔ na meyi me ho adi ne mo akasa.+ 43 “Meyi me ho adi akyerɛ Israelfo no wɔ hɔ, na m’anuonyam+ ama hɔ ayɛ kronkron. 44 Mɛyɛ ahyiae ntamadan no ne afɔremuka no kronkron, na mɛyɛ Aaron ne ne mma nso kronkron+ ma wɔasom sɛ asɔfo wɔ m’anim. 45 Mɛtena Israelfo mu na mayɛ wɔn Nyankopɔn.+ 46 Na wobehu sɛ mene Yehowa wɔn Nyankopɔn, na me na miyii wɔn fii Egypt asaase so sɛ me ne wɔn bɛtena.+ Mene Yehowa wɔn Nyankopɔn.
^ Nt., “de tumi ahyɛ wɔn nsa.”
^ Nt., “bɛhyɛ wɔn nsa ma.”